महिलामाथिको दुव्र्यवहार घटाउन के गर्नुपर्ला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः वैशाख ३१, २०७५ - साप्ताहिक
महिलामाथिको दुव्र्यवहार घटाउन के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा महिला आफैं पनि सजग र सक्षम हुनुपर्छ । अर्को कुरा, एउटी नारीलाई जिस्क्याएको अर्को नारी हेरेर बस्छन् अनि पुरुष पनि । यस्तो प्रचलन वा व्यवहारको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
महिलाहरूमा अधिकारको चेतना हुनुपर्छ । जस्तो दुव्र्यवहार गरे कहाँ उजुरी दिने, उजुरी दिँदा कतिसम्म गोपनीयता रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ अन्यथा यस्ता घटना बढेका बढ्यै हुन्छन् ।
महिलाहरू आफैं दरो हुनुपर्‍यो । आगोलाई जिस्क्याउने हिम्मत कसैले गर्दैनन् । साधारण पहिरन लगाउँदा पनि जिस्क्याउने काम कम हुन्छ ।
केही गर्नु पर्दैन । मात्र महिला–पुरुष दुवैले आफ्नो बानी–व्यवहार सुधार्नुपर्‍यो ।
मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन ।
आत्म–सुरक्षाको तालिम दिने तथा महिला दुव्र्यवहारविरुद्धको शिक्षा एवं महिला अधिकारमा जोड दिने । भएका कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने ।
कसैले त्यस्तो अनुचित काम गर्छ भने महिलाहरू आफैं तत्काल प्रतिकारमा उत्रिन सक्नुपर्छ अनि मात्र अरूले सहयोग गर्न सक्छन् । लुकाउन वा सहन खोजियो भने त्यस्तो दुव्र्यवहार कम हुनेछैन । सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ ।
एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन्छ । कडा कानुन ल्याउनुपर्छ र त्यसको पालना गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
महिलाहरूले भड्किलो पहिरन लगाउनु हुँदैन ।
सबै केटाले सबै खालका महिलाविरुद्ध दुव्र्यवहार गर्दैनन् । केटीहरूको व्यवहार एवं पहिरनका कारण पनि यस्ता घटना घट्छन् ।
महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा जान निषेध गर्नुपर्छ । नभए महिला र पुरुषका लागि छुट्टै समय तोकिदिनुपर्छ घरबाट निस्किने ।
हुन त दोष पुरुषकै हो । तैपनि छोरी मान्छेले भड्किलो पहिरन र भड्किलो मेकअप नगर्ने हो भने अलि कम होला कि ?
महिलाहरू आफैं सजग र सक्षम हुनुपर्छ । जसले दुव्र्यवहार गर्छ उसलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । डराएर समस्या समाधान हुँदैन । सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जस्तै— सिसिटिभी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था आदि ।
यो तीन कुरा ख्याल गर्नुपर्‍यो :
१. महिलालाई लामा पहिरन लागाउन जोड दिने तथा उत्ताउलो फेसनमा नहिंड्न आग्रह गर्ने ।
२. सरकारले महिला हिंसाको विषयमा कडा कानुन ल्याउनुपर्‍यो ।
३. महिलाप्रति पुरुषको नकारात्मक सोच बदल्नुपर्‍यो ।
मानव पनि सर्वजनिक पशु न हो । उनीहरू सार्वजनिक रूपमै आफ्नो व्यवहार देखाउँछन्
अनि कोही–कोही त्योभन्दा खतरनाक हुन्छन् ।
प्रकाशित :वैशाख ३१, २०७५
खानेकुरामा प्रयोग हुने विषादीको प्रकोपबाट जोगिन के गर्नुपर्ला ?
काठमाडौंको प्रदूषण घटाउन के गर्नुपर्ला ?
मोटोपन घटाउन सरकार नै अग्रसर
दिनहुँ दुव्र्यवहार !